एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा को–को पर्दैछन् ? | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २६ कार्तिक २०७६, मंगलवार १७:१६ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहित शीर्षनेताहरुसँगको परामर्शपछि अर्को साता मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भएका छन् । कम्तिमा ६ जना मन्त्री हट्दा केही प्रभावशाली नेताहरु सरकारमा सहभागी हुनेछन् ।
अध्यक्षपछिको कार्यकारी पद महासचिव भएकाले भर्खरै पार्टी एकीकरण टुंगिँदै गरेकाले पौडेल सम्पूर्णरुपमा पार्टी काममा खटिने उनीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । पौडेल मिसनकेन्द्रित व्यक्ति भएकाले जुन जिम्मेवारीमा हो, त्यहीँ सफल हुने गरी खटिने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय नेकपा पंक्तिमा महासचिव पौडेल अर्थमन्त्री हुने चर्चा चलेको छ । ओलीको पहिलो कार्यकालमा सफल अर्थमन्त्री बनेका र पार्टीको जनमत बढाउने खालेको बजेट ल्याएका कारण लोकप्रिय बनेका पौडेललाई यसपटक पुनः अर्थमन्त्री बनाउने अनुमान गरिएको थियो ।
तर, दुई वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री बन्न आग्रह गर्दा पार्टीको जिम्मेवारी मागेका पौडेल महासचिवको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने उनी निकटस्थहरु बताउँछन् । पौडेल र सुवास नेम्वाङ दुवै नेताले आफूलाई मन्त्री नबनाउन प्रधानमन्त्रीसँग यसअघि नै आग्रह गरेका थिए ।
यी बाहेक छविलाल विश्वकर्मा, अग्निप्रसाद सापकोटा, पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, रामेश्वर यादव, प्रेमबहादुर आले, किसान श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार र पार्वत गुरुङ लगायतका नेताहरुमध्येबाट केही अनुहार मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुने नेकपाको उच्च स्रोत बताउँछ । यी नामहरुमा छलफल चलिरहेको नेकपाका एक नेताले बताए ।
नेकपाका कतिपय नेताले भीम रावललाई पनि मन्त्री मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् । शुरुमा रावललाई मन्त्री बनाउन चाहेका ओली रावलले लगातार सामाजिक सञ्जालबाट आफू र सरकार विरुद्ध विपक्षीलाई मसला दिने गरी प्रस्तुत भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको बताइन्छ ।
जब कि रावलभन्दा कडा आलोचक भुसाललाई भने ओलीले मन्त्री बनाउन चाहेका छन् । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री निवासमै ओली र भुसालबीच लामो छलफल भएको थियो । त्यसयता भुसालको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीसँग सुध्रिएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा नै
प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेल लगायतका नेता अर्थमन्त्रीमा डा.युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन एकमत रहेका छन् । माघमा राष्ट्रियसभा सदस्यको २ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा खतिवडा पुनर्गठनमा हटाइने चर्चा चलिरहेको छ । तर, उनी अर्थमन्त्री नै रहने नेकपाको उच्च स्रोतले जनायो । स्रोतले भन्यो, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री नै रहन्छन् र नेकपा सरकारको तेस्रो बजेट पनि उनैले ल्याउनेछन् । संविधानतः साउन महिनासम्म उनी मन्त्री पदमा रहन पाउँछन् । राष्ट्रियसभामा पुनः नदोहोरिए पनि खतिवडाले जेठमा बजेट ल्याउँछन् । अर्थतन्त्रमा सुधारका सूचकहरु आइरहेका बेला उनलाई हटाउने कुरा चलेको छैन ।
श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्ट, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतको सन्दर्भमा भने छलफल चलिरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ । उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिए भने दुई मन्त्रालयमा पनि नेकपाकै सांसदले मौका पाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय यथावत ?
यसैबीच सामुहिक राजीनामा दिएको भनिएका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मुख्य व्यक्तिहरु यथावत जिम्मेवारीमा रहने भएका छन् । मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमाल, विदेश मामिला सल्लाहकार डा.राजन भट्टराई, स्वकीय सचिव दिपेन दाहाल लगायतको जिम्मेवारी यथावत रहने निकट स्रोतले जनाएको छ ।
आर्थिक अभियान भन्दै चन्दा माग्दै विप्लव समूह
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव समहूले ‘विशेष आर्थिक अभियान’ का नाममा मुलुकभर चन्दा संकलन तीब्र पारेको छ ।…
माइतीघर मण्डलामा भइरहेको विशाल प्रदर्शनका तस्बिरहरु
काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएपनि काठमाडौंको माइतीघरमा विशाल खरबारी सभा आयोजना भइरहेको छ । माइतीघरको…
दैलेख । दैलेख केन्द्रविन्दु भएर गएराति ५.१ रिक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ ।
जिल्लाको नौमुले गाउँपालिकास्थित बालुवाटार केन्द्रविन्दु भएर गएराति…
वैदेशिक लगानी आधा कम, नौ महिनामा सात अर्ब आप्रवाह
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति नियम सुधार गरिरहेको दाबी गरे पनि त्यसको प्रभाव भने देखिन सकेको…